Eminyakeni embalwa eyedlule, igama lika-Irina Sheik alizange linyamalale emakhasini ezincwadi zezwe. Ibutho elikhulu labalandeli libukela ngokucophelela izindaba zakamuva mayelana nalokho abakuthandayo, bebheka konke ukubukeka kwakhe ezenzakalweni ezihloniphekile nasemakhasini amathebhudi afanelekayo. Kodwa-ke, ukuqashelwa kwendawo yonke, izimali ezidayayo kanye nezembozo ezimangalisa zomagazini abathandwayo zazilandelwe ubunzima obunzima benkanyezi esikhathini esizayo.
Phakathi kwengxoxo yakamuva nezintatheli zenye yezincwadi zaseNtshonalanga, imodeli enhle yakhuluma ngokucacile ngezimo okufanele aphile ngayo esemncane. Umndeni wenkanyezi yesikhathi esizayo wawuhlala ngokuthobeka, futhi lapho intombazane eneminyaka engu-14 ubudala ishona uyise, kwaba nzima kakhulu. Kwakudingeka ngisebenze ensimini, ngithule utamatisi namazambane ngandlela-thile ngizondla ngokwabo.
U-Irina Shaikhlislamova wazalelwa futhi wakhulela edolobhaneni elincane lase-Emanzhelinsk, ngaseChelyabinsk. Ngaphezu kokusebenza ensimini, le ntombazane yayingekho enye indlela yokuthola imali:
Kwadingeka ngisebenze, ngiqoqe amazambane kanye noTamatisi, ngoba lokhu kwakuwukuphela kwendlela yokuthola imali edolobheni lethu elincane.
Umndeni ohlanganisa unina, ugogo nodadewethu babengenakukwazi ukuthenga noma yikuphi ukuthenga okubizayo. Ukuze athole izicathulo ezinhle, u-Irina ngandlela-thile waphumelela ukuthola imali ekulungiseni isibhedlela: intombazane yayidweba indawo. Ngenyanga yonke yomsebenzi wathola ama-dollar angu-20:
Ehlobo, ngikhokhelwa imali engu- $ 20 ngezinsuku ezingu-30 zomsebenzi - Ngabhala esibhedlela sendawo.
Oontanga bahleka u-Irina: wayemncane kakhulu futhi egqoke ngokuzithoba. Ngisho nentombazane yezinwele yayingathathwa - yayikhiwe ngudadewabo omdala.
Yiqiniso, u-Irina akazange ngisho alindele ukuthi eminyakeni eyishumi uzohlala eNew York, futhi uthole imali, ongayithenga kuyo yonke idolobha lapho azalwa khona. Kodwa enye intombazane yayinesiqiniseko - ngeke ihlale e-Emanzhelinsk.
Isinyathelo sokuqala empilweni entsha sasingena e-Chelyabinsk Economic College, lapho imodeli yesikhathi esizayo efundiswa ukukhangisa. U-Irina waphawula eqenjini lezithombe zendawo futhi wanikela ukusebenza kwelinye lama-ejenti yokufanisa. Ukunqoba emncintiswaneni wobuhle waseChelyabinsk kwavula izwe elisha intombazana engaziwa yintombazane. Ngemva konyaka, ngo-2005 u-Irina waqala ukusebenza njengeYurophu.
Kodwa-ke, eParis, lapho uSheik ahlangana khona namanye amamodeli, kwakudingeka anqobe ubunzima. U-Irina ukhumbula ukuthi kwakukhona izikhathi lapho kungekho lutho lokudla. Kodwa ubunzima buvusa kuphela imodeli, bephoqelela ukuba balwele umgomo:
Ngikhumbula kanye kanye eParis, lapho ngiqala, ngangingenayo imali ngisho nokudla. Lokhu kwakuyisimo sokushintsha kwami, ngangingafuni ukuyeka. Ngangazi ukuthi angikwazi ukubuyela ekhaya ngingenzi lutho, futhi lokhu kwangenza ngasebenza kanzima.
Isibonelo sika-Irina Sheik wayengumkhulu wakhe
U-Irina uvumile ngokuphindaphindiwe ukuthi umama wakhe nogogo bakhetha isibonelo sakhe. Ugogo wakhe ufe ngonyaka odlule, kodwa u-Irina umbiza ngokuthi "heroine ngokuphelele."
Kuyaziwa ukuthi uGalileya Shaikhlislamova wayeyi-scout phakathi neMpi Enkulu yePatriotic futhi waba nemiklomelo eminingi. U-Irina Sheik unephupho elimnandi - ukudlala i-movie njengenhloli ekukhumbuzeni ugogo wakhe othandekayo.
UVggeny Tsyganov washiya umkakhe wesikhombisa ngomntwana
UKonstantin Khabensky no-Olga Litvinova balinde ingane
I-kompromatov engu-5 ku-candidate u-Ksenia Sobchak, izithombe namavidiyo
USergei Bezrukov wagxekwa ngesithombe esine-stroller
UMeraye Carey wanikela umgexo ngesigamu sezigidi zamaRandi
Ukulandela u-Lena Miro, u-Alena Vodonaeva, uhlasele u-Alice Arshavin
Amanzi olwandle empilo yabesifazane
Ngabe kufanele kanjani ukuthi ingane igqoke esibelethweni?
Umnyango njengento yokuhlobisa
Indlela yokudlala ngothando nabantu
Cocktail of ikhabe kanye ikhukhamba
Indoda engashadile, indlela yokuqamba imbuzi eyodwa?
Izindwangu zezingane ezisezingeni eliphezulu 2016: izitayela zangempela kanye nezinhlamvu
Salmon steak in sauce orange
Yiziphi imikhiqizo ezitholayo
Injabulo enamakha: ama-peaches akheniwe
Ukwakhiwa kwamavithamini ama-complexes kwabesifazane abakhulelwe